Banyere Anyị - Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd.
Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd. e guzobere na 2016, anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke ụgbọ ala polishers na ụgbọ ala na-elekọta ngwaahịa, tụnyere mmepe na mmepụta, ahịa, na ahia ọnụ.
Mgbe ihe karịrị 4+ afọ nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, anyị na ngwaahịa na-exported ka Europe, America, Southeast Asia, Africa, Middle East, wdg Ha na-ukwuu appraised site ahịa na asọmpi n'ime otu azụmahịa akara.
JIANGXI CHECHENG na-pụrụ iche na R & D, mmepụta, na ahịa nke sọrọ edinam polishing igwe, rotary ụgbọ ala polisher, na mini igwe polisher. Anyị ejirila aka anyị mepụta ma mepụta igwe dị iche iche na-acha polishing, dịka NEW Super Palm Series DA polishers, Best Sell X-Bot series DA polishers, DF series DA polishers, rotary polishers, and mini polishers. Enweela ngwaahịa anyị na asambodo CE na RoHS.
Dị ka a emeputa, anyị nwere onwe anyị factory dị na Yongkang, Zhejiang ebe bụ ma ama n'ihi na igwe-ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, niile R&D na mmepụta-eme ebe a. Onye na-ahụ maka teknụzụ, onye na-ekenye ya na Checheng, nwere afọ 10 + nke ahụmahụ na R&D na imepụta ndị na-ahụ maka ụgbọ ala. Site na teknụzụ ya dị ukwuu na nghọta nke ngwaahịa na ahịa, ndị ahịa anyị anatawo ndị ahịa anyị nke ọma ma ghọtara site n'ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya.
Anyị nwere otu ọkachamara na-ekwenye ekwenye iji mezuo ihe ị chọrọ. Ndị otu anyị gụnyere ndị ndu nwere ọhụụ, ndị otu R&D nwere ahụmahụ na ndị ọrụ ntanetị, ndị ahịa ruru eru, ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi na ndị ọrụ njikwa mma.
Anyị dị njikere igosi gị usoro ngwaahịa anyị ma duzie gị na nhọrọ nke ngwaahịa ndị kachasị dabara na mkpa gị.
1. N'ihi na ika ahịa, anyị nwere ike inye igwe imewe, R & D, na ebu oghere, ike oru nkwado, na a zuru ezu ọrụ usoro.
2.N'ihi ndị na-ere ahịa ahịa, ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na-arụrụ onwe ha ọrụ, anyị nwere ngwongwo zuru oke, nzaghachi ọsọ ọsọ, mbubata mbupu, nnyefe ọsọ ọsọ, nchekwa ahịa ahịa, enweghị ego na nrụgide ngwaahịa.
Checheng n'ezie nwere ike inye ndị ọkachamara na ọrụ klas mbụ dịka arịrịọ ndị ahịa.
Production na Mbupu
Ebumnuche anyị bụ ịnye ngwaahịa ndị kachasị ọhụụ na ọrụ kachasị mma na ọnụ ahịa kachasị ọnụ ahịa. Anyị hNa-arụ ọrụ na-ekwenyere ndị ahịa ndị ọzọ maka mmepe na uru ọ bụla. A na-anabata ndị na-azụ ahịa ịkpọtụrụ anyị!